Units Plus Beddelka bilaashka ah wakhti xaddidan | Wararka IPhone
Runtu waxay tahay in toddobaadkan ay na haysteen wax aad u yar, oo aan la dhihi karin, ma jiro barnaamij bilaash ah oo u qalma, laakiin nasiib wanaag maanta waxaan helnay mid ka mid ah kuwa u safraya dibadda inta lagu jiro fasaxan. Units Plus Beddelka, waa codsi ku habboon fasaxyadan tan iyo waxay noo ogolaaneysaa inaan bedelno cabir kasta, lacag, heerkul, mug, masaafadWhich Kuwaas oo aynaan aqoon u lahayn. Codsigani wuxuu leeyahay qiimo joogto ah App Store-ka oo ah 2,99 euro laakiin waqti xaddidan ayaan ku soo dejisan karnaa gebi ahaanba bilaash.
Hawlgalka codsigan waa mid aad u fudud, maadaama uusan ka duwanayn barnaamijyada kale ee noo ogolaada inaan fulino beddelaad, isla marka aan furno arjiga waxaan helnaa dhammaan xulashooyinka la heli karo iyada oo aan loo baahnayn menusyo kala duwan. Qeybta bidix waa inaan dejino qeybta aan rabno inaan u beddelno oo midigta waa inaan ka siibnaa xulashooyinka jira illaa aan ka heleyno midka ku habboon baahiyaheenna.
Cutubyada lagu beddelo waxay noo ogolaaneysaa inaan badalno ilaa 12 nooc oo kala duwan Kuwaas oo aan ka helno: Aagga, Lacagta, Xogta (byte, kilobyte, megabyte…), Shidaalka - Masaafada, Dhererka, Tamarta, Cadaadiska, Xawaaraha, Heerkulka, Waqtiga, Mugga iyo Miisaanka. Qiimaha sarrifka waa la cusbooneysiiyaa 15-kii daqiiqo ee kasta marka uu dalabku socdo ama mar kasta oo aan socodsiino. Units Plus Converter ayaa noo ogolaaneysa inaan u beddelno lacagaha u dhexeeya 155 ka lacagaha ugu badan laga isticmaalo adduunka.
Codsigan, oo ah codsi lacag bixin ah, marka laga reebo marka la iibinayo sida kiisku yahay, ma laha nooc ka mid ah iibsashada gudaha-app. Intaas waxaa sii dheer, nama siiso xayeysiin sida haddii aan ka helno dalabyo badan oo bilaash ah oo noocan ah, sidaa darteed haddii aad caadi ahaan u isticmaasho mid bilaash ah oo leh xayeysiin, codsigani wuxuu iska ilaalin doonaa inuu ku silco boodhadhka xayeysiinta faraxsan ee hoose ee arjiga.
Wadada buuxda ee maqaalka: Wararka IPhone » Barnaamijyada IPhone » Units Plus Beddel bilaash ah wakhti xaddidan
Khariidadaha Apple waxay ku siin doonaan macluumaad la dhigto oo faahfaahsan mahadnaqa Parkopedia